Jersey Bra & Knickers French PDF zokuthunga Pattern – i Tailoress
ekhaya / Women / lingerie / Jersey Bra & Knickers French PDF zokuthunga Pattern
Lo ngumzekelo comfy ijezi bra tsala-on. wadala lula beentanda icala amabini kuphela kwaye imikhonto ezimbini. Le ndlela lokuthunga PDF ibandakanya ubukhulu yabasetyhini 4-18 cup Isanti A / B / C / D / DD. Sika ubukhulu indebe ezifunekayo kunye nesayizi band. Create the matching french knickers in sizes 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 /16 / 18.
SKU: JeBrPDSePa-1 izigaba: lingerie, Women tags: bra, intombazana, ijezi, lingerie, izinxibo zangaphantsi, abafazi
Lo ngumzekelo comfy ijezi bra tsala-on. wadala lula beentanda icala amabini kuphela kwaye imikhonto ezimbini. Le ndlela lokuthunga PDF ibandakanya ubukhulu yabasetyhini 4-18 cup Isanti A / B / C / D / DD. Sika ubukhulu indebe ezifunekayo kunye nesayizi band.
Sicela ubukele Jersey BRA Isifundo and the JERSEY FRENCH KNICKER TUTORIAL apha okanye ucofe iqhosha ngezantsi ukuvula kuyo kweli khasi.
Zonke iipateni Baphuma zinga njengokuba ngokupheleleyo amaxwebhu ukukuvumela ukushicilela kwi kumaphepha ezahlukeneyo ngobukhulu kwakunye A4 ne US Letter kwakhona amaxwebhu.
JERSEY BRA: ubukhulu Copyshop: 30cm x 42cm / amakhasi A4: 4 / US Letter: 4
JERSEY FRENCH KNICKERS Copyshop size: 20cm x 79cm / amakhasi A4: 5 / US Letter: 4
STRETCH JERSEY FRENCH KNICKERS Copyshop size: 20 cm x 69cm / amakhasi A4: 4 / US Letter: 4
Yiba ngowokuqala ukuphonononga "Jersey Bra & Knickers French PDF zokuthunga Pattern”